Hoggaamiyeyaashii Al-Shabaab ee shalay miyay dowladdu kala dooratay? - BBC News Somali
Image caption Mukhtar Robow
Image caption Zakariye Ismaacil, wuxuu horay uga tirsanaa Al Shabaab, haddana dowladda
Muddo kadib, Zakariye waxaa uu suuragashay in uu isu soo dhiibo dowladda federaalka, xilligii Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana isla markiiba uu ku biiray hay'adda nabadsugiida, oo uu hataan ka yahay sarkaal sare.
Lahaanshaha sawirka Sahan Journal
Image caption Xassan Daahir Aweys
Lahaanshaha sawirka Askar ayaa sanadihiid dambe ka soo goosatay
Image caption Al Shabaab
Mudod dheer oo uu afhayeen u ahaa Al Shabaab kadib, wuxuu markii dambe go'aansaday in uu isaga soo baxo, isagoona waqti dheer ku dhuumalaesanayay deegaanno miyi ah.
Abuu Mansuur oo sanad kahor shir jaraa'id ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in uu ka tanaasulay fikirkii uu aaminsanaa, waxaana heshiis dhexmaray isaga iyo dowladda federaalka uu sahlay in uu damac ka galo siyaasadda Koonfur Galbeed.
Saameyntiisa oo sii korodhay iyo dowladda federaalka oo aan ku qancin siyaasadaha Abu Mansuur ayaa waxay dhalisay in madaxda federaalka ay go'aan ka qataan, taas oo noqotay in doorashadii Koonfur Galbeed uu ka baaqdo, laguna xiro Magaalada Baydhabo, kadibna loo sii qaaday Muqdisho.
"Magaalada Muqdisho waxaan u tagnay in aan dowladda federaalka kala hadlano arrinta Mukhtaar, indhaheena ayaan kusoo aragnay isagoo xabsi guri ah, dowladdauna maalin ba maalinta ka dambeysa waa ay iska keen daba wareejisay, anaguna wax rajo ah kala ma aanan kulmin", sidaa waxaa BBC-da u sheegay Malaaq Cali Boor oo kamid ah odayaasha dhaqanka.
Qaabka dowladda ay ula macaamishay raggan ayay su'aal geliyeen dadka qaar, halka dadka wax fallanqeeyana ay ku doodayaan in waxa Mukhtar loo heysto aysan ahayn kamid ahaanshihii Al Shabaab, balse ay tahay saameynta siyaasadeed.
"Aniga waxay ila tahay in Mukhtar Robow uusan u xirnayn fikir uu aaminsanaa, balse uu u xiran yahay damaciisa siyaasadeed iyo rabitaankiisa ku aaddan maamulka Koonfur Galbeed, madaxweyhenimada Koonfur Galbeed ayaan loo oggoleyn, waxaana la rabay Baydhabo sida laga sameeyay in laga sameeyo", sidaas waxaa ku doodaya Xassan Cali oo fallanqeeya arrimaha siyaasadda.
Haddaba dad badan ayaa aaminsan in sida ay dowladda Federaalka u maareysay mas'uuliyiintii AL Shabaab ee isu soo dhiibay ay saameyn weyn ku yeelan karto kuwa kale ee damacsan in ay isasoo dhiibaan ama fikirkaas uu ku jiro.